Stud nasionaly irlandey sy zaridaina japoney - IntoKildare
Ny Irish National Stud dia toeram-piompiana soavaly malaky ao Tully, County Kildare, Irlandy. Trano misy soavaly tsara indrindra & zaridaina japoney be voninahitra.
Tsy misy na inona na inona maneho tsara kokoa ny zavatra tsara momba an'i County Kildare, ny fo mitambesatra ao amin'ny indostrialy malaky any Irlanda, toy izay ny Irish National Stud & Gardens, manintona tsy manam-paharoa hatsaran-tarehy voajanahary miavaka izay misy ny sasany amin'ireo soavaly tsara indrindra sy zaridaina manja hita. na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ary mazava ho azy ny Irlandey Racehorse Experience, manintona voalohany manerantany ho an'ny 2021.
Manomboka amin'ny volana febroary ka hatramin'ny desambra ny Irish National Stud & Gardens dia manolotra zavatra ho an'ny rehetra. Miaraka amin'ny fitsidihana isan'andro amin'ny toeram-piompiana Stud, ny zaridaina japoney malaza eran-tany, ny zaridainan'i St Fiachra ary trano fonenan'ny Living Legends - ny sasany amin'ireo hazakazaka malaza indrindra any Irlandy (Faugheen, Beef na Salmon, Hurricane Fly, Kicking King, Hardy Eustace ary Rite Of Ny làlana dia misotro ronono avokoa ao amin'ny Stud).
Outdoors, Kildare mpitaingin-tsoavaly, Fianakaviana ankohonany, Kildare
Tully, County Kildare, R51 KX25, Irlandy.
Alatsinainy ka hatramin'ny alahady: 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva, fidirana farany amin'ny 5 hariva.
Tsidiho ny tranokala mandritra ny ora fisokafana Novambra ka hatramin'ny Janoary.